Sida loo isticmaalo kombuyuutarrada xogta kombiyuutarka ee loogu talagalay soo celinta xogta diskiga ah - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Sida loo isticmaalo kombuyuutarrada xogta kombiyuutarka ee loogu talagalay soo celinta xogta diskiga
Maxaan sameeyaa haddii xogtii U disk lumay? Keebaa u wanagsan barnaamijka kombiyuutarka 'disk disk data?' Sidee looga soo kabanayaa xogta kombiyuutarka 'disk disk'? Maanta, waxaan soo bandhigi doonaa sida loo xusho kombuyuutarrada xogta disk celinta iyo sida loo isticmaalo barnaamijyadan si loo soo helo xog kala duwan oo lumisay iyadoo la tirtiray iyo qaabkii burburka U disk. Ku saabsan barnaamijyada soo kabashada kombiyuutarka 'disk disk data software free download'
Ku saabsan kombiyuutarka 'disk disk data software' Soo-kabashada xogta kombiyuutarka ee xogta kabashada U disk-ka? Ku saabsan aaladda soo kabashada xogta kombiyuutarka
Ku saabsan soo-kabashada xogta disk-ga ah ee aaladda U disk waxay leedahay muuqaal aad u sarreeya iyo meel lagu keydiyo. Aad u weyn, oo ka dhigaya U disk mid ka mid ah warbaahinta kaydinta ugu habboon ee loogu talagalay dadka isticmaala. Isticmaalayaasha U disk waa kuwo aad u weyn, waxayna kaydin karaan xogo kala duwan sida feylasha, sawirrada, fiidiyaha, maqalka, softiweerka, iwm, waxaana sidoo kale si ku habboon loogu xiri karaa kombiyuutarka si loogu wareejiyo xogta iyada oo loo marayo dekedda USB, taas oo ah mid aad u habboon. Diskiyeyaasha U ayaa siiya dadka isticmaala xog kaydinta habboon iyo adeegsiga gudbinta siyaabo badan, laakiin dhibaatooyinka Uks diskiyada ay u fududaan yihiin burburin iyo luminta xogaha ayaa wali u horseedi doonta dhib ku dhaca isticmaaleyaasha. Waa maxay sababta xogta kombiyuutarka U disk-ka loo lunsaday? Sababta oo ah muuqaalka iskujira ee muuqaalka U disk-ga, inta badan waxaa adeegsada isticmaaleysa Inta lagu gudajiro isticmaalka, waxaa hubaal ah inuu ku dhici doono oo uu ku dhici doono dhulka, taas oo u horseedi karta waxyeello u dhinta U disk-ka iyo luminta xogta. Dhibaatada ugu weyn ee fayraska kombiyuutarka ayaa ah burburka macluumaadka iyo luminta xogta muhiimka ah; hawlgalka aan habbooneyn ee aan ka midka ahayn, sida gelinta bakhtiyaanasiibka iyo ka takhalusida U diskiga marka la akhrinayo iyo qorista xogta, waxay sababi doontaa dhibaatada in diskka U aan la furi karin oo aan la aqrin karin. Marka lagu daro qodobada kor ku xusan, adeegsadayaasha si qalad ah u masaxa faylalka, qaab qalad ah iyo howlo kale ayaa sidoo kale sababi doona luminta xogta. Maxaan sameeyaa haddii xogtii ku jirtay diskiga U uu lumay? Xaaladaha badan, luminta xogta U disk waa lama huraan, laakiin isticmaaleyaal badan ayaan waligood taageerin feylasha lumay. Xaaladahan, adeegsadayaashu waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan barnaamijyada soo kabashada ee xogta diskiga ah si ay u soo ceshadaan xogta lumay. Halkan waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho barnaamijka kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'DiskGenius' si loo dhammeeyo hawsha dib u soo kabashada xogta diskka ah. . DiskGenius waa barnaamij heer caalami ah oo khibrad u leh soo kabashada oo leh howlo awood leh iyo howlo dabacsanaan leh, kaas oo loo adeegsan karo in laga soo ceshado xogta noocyada kala duwan ee USB flash Drive-ka. Ka sokow soo kabashada dhammaan noocyada xogta lumay ee disk-ga U, DiskGenius wuxuu kaloo taageeraa soo kabashada xogta diskka adag, soo kabashada kaarka xusuusta kaarka xusuusta, soo-kabashada xogta diskka adag, soo-kabashada xogta buugga, iyo soo-kabashada xogta disk-ga ah, Dib-u-habeynta kumbuyuutarka, dib-u-habeynta waaxda, qaybta Soo kabashada xogta horumarsan sida soocelinta. DiskGenius softiweer kaliya ma bixiso saameynta heerka-xirfadeed ee xogta soo kabashada, laakiin sidoo kale howlgalka softiweerku way sahlan tahay in la barto. Qalliin adag looma baahna inta lagu jiro nidaamka soo kabashada, xitaa adeegsadayaasha caadiga ah ayaa si madaxbanaan u dhammayn kara. Saddexda daabacadood waxay wadaagaan xirmo qaybinta isla markaana uma baahna in gooni loo soo dejiyo; kadib markaad soo dejiso, waxaad adeegsan kartaa howlaha daabacaadda bilaashka ah ee DiskGenius . Soodejiso nooca bilaashka ah ee software kabashada xogta disk disk-ga oo bilaw inaad soo kabato xogta diskka U disk! Sida loo istcimaalo kombuyuutarrada xogaha U disk data kabashada xogta disk disk? Haddaba, aan eegno sida loo isticmaalo barnaamijyada dib u soo kabashada ee diskiga 'DiskGenius U disk' si loo soo ceshto dhammaan nooc kasta oo ah macluumaadka lumay U disk. Tallaabada ugu horreysa: geliso diskka USB-ga ee u baahan inuu luumo xogta dekedda USB ee kombiyuutarka si loo hubiyo in kombiyuutarka uu aqoonsan karo disk USB-ga. Tallaabada 2: Ku socodsii kombiyuutarka DiskGenius kombiyuutarka kombiyuutarka, xulo diskka u baahan inuu soo celiyo xog ku saabsan barnaamijka weyn ee softiweerka, ka dibna guji batoonka soo celinta ee batoonka, sida ku cad shaxanka hoose. Tallaabada 3: Guji badhanka bilawga ee daaqadda faylka soo-kabashada ee soo-kabashada. Intaa ka dib, softiweerku wuxuu fuliyaa gobolka iskaanka. Booska kaydinta diskiga diskiga badanaa ma badna, sidaa darteed waqtiga loo baahan yahay iskaanka ma noqon doono mid aad u dheer, samir sug. Marka skaanka uu socdo, softiweerku wuxuu si isdaba joog ah u liis garayn doonaa faylalka uu helo. Waqtigaan, waad gudan kartaa faylka Hordhac U jiid oo u daa daaqadda skaanka dhinaca, ka dibna laba jeer guji faylka natiijada natiijada si aad u furto faylka, sida ku cad shaxanka hoose. Haddii aad ogaato in feylasha la soo celin lahaa la helay, waad ku gabagabeyn kartaa skaanka hortiis. Tallaabada afraad: soo kabashada feylasha. Markaad hesho faylka lagu soo celinayo natiijada skaanka, hubi faylka oo guji batoonka midigta ah, si aad u xulan karto nuqulka ikhtiyaarka faylka loo cayimay. Isla markii uu barnaamijku sameeyo, koobi faylasha laga soo helay meel aamin ah. Kor ku xusan wuxuu sharaxayaa barnaamijka kumbiyuutarka ee soo kabashada xogta kombiyuutarka iyo sida loo sameeyo U disk disk-ka. Soo kabashada xogta. Haddii xogta ku saabsan disk-ga U si lama filaan ah loo tirtiro, U disk-ga ayaa loo qaabeeyaa si shil ah, ama disk-ga U uu ku guul darreysto inuu furo oo uu dardargeliyo qaabeynta iyo xaaladaha kale ee luminta xogta, waxaad isku dayi kartaa habka kor ku xusan inaad ka soo kabato. Waa in la ogaadaa in haddii aad ogaato in xogta diskka U ay luntay, waa inaad ka fogaataa dhammaan qorista howlaha oo aad u isticmaashaa barnaamijka kumbuyuutarka gaarka ah ee soo kabashada xogta disk si aad u soo celiso waqtiga.
PreQalabka dib u soo kabashada xogta kombiyuutarka si loo helo xogta lumay
NextMaxaan sameeyaa haddii U diskku uu kiciyo qaabeynta? Sida loo soo celiyo xogta diskiga U